၂။ ဒေါက်တာ ဦးဘဦး ( ၁၈၈၇-၁၉၆၃ ) ၁၃-၃-၁၉၅၂ မှ ၁၃-၃-၁၉၅၇ ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ရခိုင် အမျိုးသားများ၏ တောင်ဆိုချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ် ပေး ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ မှ အကြံပေး ရေး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ (၂၉) ရက် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး ခဲ့ပါသည်။ယင်းအဖွဲ့ တွင်အောက်ပါ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် နိုင်ငံတော် အဆင့် အမြင့် ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ (၁) – ဥက္ကဌ – ဒေါက်တာ ဦးဘ ဦး၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတဟောင်း (၂) – […]
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနယ်စပ်အနီး၊ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်တောမြို့နယ်များတွင်ရိုဟင်ဂျာနှင့်၊ ရခိုင်စစ်တကောင်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ထိုလူမျိုးများ သည်။ ရှေး ပဝေ သဏီ ကပင် နေထိုင်ခဲ့ကြ သော တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြသည် ဟု Page No. (94) တွင် အောက်ပါအတိုင်း အင်္ဂ လိပ် လို ရေးသား ထားသည်ကို ဘာသာ ပြန်ခြင်းဖြစ် သည်။ Page No. (94) ………… In northern Rakhine State close the boder with the Bangladesh at Butheetaung and Maundaw township are where the Rohinggas and chittagarean live.These minority ethnic groups […]
N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar Go to the Burmese Version – Link (1) – (Burmese Version) Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက်တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ […]
ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်စလင်ကျောင်းသူ/သားများ၏ ပညာရေးကိစ္စကို NDPD ပါတီမှ သမ္မတထံတင်ပြသော စာတမ်း
မမေးလည်းဖြေ(၁၄)- ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့် အစ္စလာမ်နှင့်ဂျေဟားဒ် Posted: 06 Jan 2013 ဇန်နဝါရီ ၇ ၊၂၀၁၂ ဂျူလိုင်ရဲရင့် (ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုတဲ့စကားကို အစ္စလာမ့်အတွင်းအပြင် နှစ်ဖက်လုံး စတင်ပြောဆိုနေတာ ကြားလာရလို့တဲ့ ဒီဘာသာပြန် ဆောင်းပါးကို M-Media ကို ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ) ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့် ဂျိဟာ့ဒ် ( ဖန်ဆင်းရှင်၏နှစ်မြို့မှုအလို့ငှါ မကောင်းမှုအား ဆန့်ကျင်ရာ၌ ရုန်းကန်အားထုတ်ခြင်း ) လက်ဦးပထမဆုံးဆိုရမည်မှာ ဂျိဟာ့ဒ် ဟူသည် မြင့်မြတ်သောစစ်ပွဲ – Holy War မဟုတ်ပါ။ ဂျိဟာ့ဒ်၏ဆိုလိုရင်းအနှစ်သားမှာ – ဖန်ဆင်းရှင်၏နှစ်မြို့မှုအတွက် မကောင်းမှုအားဆန့်ကျင်ရာ ၌ (ရေကုန် ရေခမ်း) ရုန်းကန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် […]
Sunday, April 03, 2011 လူသားတိုင်း ရသင့်ရထိုက်သော ရပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့် များကို လူမျိုးဘာသာမရွေး ရရှိသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ Human Rights – (လူ့အခွင့်အရေး) ကိုတန်ဖိုးထားရာ ရောက်ပါမည်၊ Human Rights သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးတွင် အဓိကအခြေခံကြသော မရှိမဖြစ်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Human Rights ကို လေ့ကျင့်မှု၊ တန်ဖိုးထားမှု အားနည်းသော စစ်အစိုးရလက်အောက်ရှိ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများ သည်လည်း အနဲနှင့်အများ Human Rights ၏ တန်ဖိုးကို အပြည့်အဝနားမလည်ကြပါ။ ယ္ခုအချိန်သည် မြန်မာလူမျိုးများ အားလုံးအတွက် မျက်စိဖွင့် နားပွင့်၍ လူမျိုးဘာသာမရွေး အတူလက်တွဲရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်ပါက စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲ၊ မှိုင်းတိုက်၊ […]
ဖတ်လိုသည်ကို တစ်ခုချင်းကလိက်လုပ်၍ဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းဝင် ပွဲကြီးကို ပါဝင်ကြမဲ့ … 26 Nov 2011 … သမိုင်းဝင် ပွဲကြီးကို ပါဝင်ကြမဲ့ အနုပညာသည်တွေနဲ့ အတူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရ … http://www.youtube.com/watch?v=wU1dPJPDfAw လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် …3Mar 2012 … လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးကို အရောက.. . မန္တလေးကိုရောက်လာမယ့် လူထုခေါင်းဆောင် … sayaba.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် 8 Aug 2010 … လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းများ (စုစည်းမှု-၂). ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလအတွင် … freedomuprising.blogspot.com/2010/08/blog-post_181.html သင်္ကြန်အတက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင် … […]
Muslim Identity and Demography in the Arakan state of Burma By Dr. Habib Siddiqui 1: Introduction Burma (or today’s Mayanmar) isacountry of many nations – many races, ethnicities and religions. It is notacountry either of or for any particular group – be they are the majority Bamar (Burman), the minority Shan, […]
Download link:Muslim in Myanmar Land before AD – 1823 Download link:Muslim in Myanmar Land before AD – 1823 Pdf ပြုလုပ်ရာတွင် (ဥ ၊ေ၊U A) စသောစာလုံး ပြေားသွားသဖြင့် အထက်ပါ Download link ကို ကလိပ်လုပ်ပါ။ မူရင်အတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင် ပါသည်။ AD ( ၁၈၂၃ ) ခုနှစ် မတိုင်မီကမြန်မာနိုင်ငံ၌ ပင်ရင်းနှိုင်ငံအဖြစ် နေထိုင်ကြခဲ့သောမွတ်ဆလင်များ အမှာစာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းရာဇ၀င်များကိုလေ့လာကြည့်လျှင်မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ် ၌နေ ထိုင်ကြသော အစ္စ လာမ် ဘာသာဝင် မြန်မာမွတ်ဆလင်များ သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်၊ […]
၁၉၇၊ – စစ်တွေ အမျိုးသားကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဦးဇိုင်နဒ္ဒိန် (ဓါတ်ပုံ ၃ ပုံ) မစ္စတာနေရူး၊၎င်း၏သမီးမစ္စစ်အင်ဒီရာဂန္ဒီနှင့်တွဲလျှက် Principle Of National School, Akyab ၁၉၄၂ ခုနှစ်ခန့်က အမျိုးသားကျောင်းသားများနှင့်အတူစစ်တွေအမျိုးသားကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမစ္စတာ ဇော်နော်ဒိန် (အလယ်) ၁၉၄၂ ခုနှစ်ခန့်က စစ်တွေအမျိုးသားကျောင်း၌ မစ္စတာနေရူး မတ်တပ်ရပ်၍မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် မစ္စတာ ဇော်နော်ဒိန် ၊ မစ္စတာ နေရူး နှင့် သမီး မစ္စစ် အင်ဒီရဂန္ဒီ ၁၉၄၂ ခုနှစ်ခန့်က စစ်တွေအမျိုးသားကျောင်း၌ မတ်တပ်ရပ်၍ မစ္စတာဇော်နော်ဒိန်မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် မစ္စတာ ဇော်နော်ဒိန် ၊ မစ္စတာ နေရူး နှင့် သမီး မစ္စစ် အင်ဒီရဂန္ဒီ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Principle Of National School, Akyab စစ်တွေ […]
မြန်မာ့ မင်းဆက်များ ( Burma Dynesties ) မြန်မာနိုင်ငံ မင်းဆက်များ Jump to: အညွှန်း, ရှာဖွေရန် [hide] v •d•eမြန်မာနိုင်ငံ မင်းဆက်များ မြန်မာနိုင်ငံ မင်းဆက်များ ပထမတကောင်းမင်းဆက်၊ ဒုတိယတကောင်းမင်းဆက်၊ သရေခေတ္တရာပထမမင်းဆက်၊ သရေခေတ္တရာဒုတိယမင်းဆက်၊ ပုဂံမင်းဆက်၊ ပင်းယမင်းဆက်၊ စစ်ကိုင်းမင်းဆက်၊ မဂဒူး မင်းဆက်၊အင်းဝမင်းဆက်၊ တောင်ငူမင်းဆက်၊ မွန်မင်းဆက်၊ ရခိုင်မင်းဆက်၊ ညောင်ရမ်းမင်းဆက်၊ ကုန်းဘောင် မင်းဆက် ထင်ရှားသော မင်းများ ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်း၊ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ အလောင်းစည်သူ၊ ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ၊သတိုးမင်းဖျား၊ ၀ါရီရူး၊ ရာဇာဓိရာဇ်၊ ပထမမင်းခေါင်၊ ရှင်စောပု၊ ဓမ္မစေတီ၊ ရွှေနန်းကျော့ရှင်နရပတိ၊ သိုဟန်ဘွား၊ တပင်ရွှေထီး၊ဘုရင့်နောင်၊ နတ်သျှင်နောင်၊ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီး၊အနောက်ဖက်လွန်မင်း၊သာလွန်မင်း၊ အလောင်းမင်းတရား၊ ဆင်ဖြူရှင် ၊ဘိုးတော်ဘုရား၊ မင်းတုန်းမင်း၊ သီပေါမင်း […]
A History of Arakan (Past & Present) by Dr.Yunus လင့်များကိုနှိပ်၍ ဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Sections show allcollapse« prev | next » Preface Introduction Chapter I – The land and the people Chapter II – Early History Chapter III – Muslim conquest of Arakan Chapter IV – The Decline and fall of Arakanese Empire Chapter V – Socio-Religious life […]
အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ်ဘာသာစတင်ဝင်ရောက်ပုံ အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော် (၁၂၀၀) ခန့်ကစ၍ အုပ်စုလိုက်လည်းကောင်း၊တစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးချင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း ပျံ့နှံ့ဝင် ရောက် ခဲ့ပါသည်။ သမိုင်း အထောက်အထားများအရ အစ္စလာမ်ဘာသာ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပုံမှာ ပြည်ပ အစ္စလာမ်သာသနာပြုများက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် သာသနာပြု သဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ် ဘာသာရောက် ရှိလာပုံနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါသမိုင်းမှတ်တမ်း အထောက်အထားများအရ လေ့လာသိရှိပါ သည်။ အေဒီ ၁၄-ရာစုနှစ်များအတွင်း စုမားတြား၊ ဂျာဗား၊ မာလာယု ကျွန်းဆွယ်များ မှ တစ်ဆင့် အာရဗ်ကုန်သည်များသည် မြိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေကြပြီးဖြစ်သည်။ (ဦးခင်မောင်ကြီး မြန်မာပြန်၊ မောရစ်ကောလစ်ရေး Into Hidden Burma စာ-၂၁၁အေဒီ ၇၀၀ နှင့် ၁၅၀၀ အကြားတွင် […]
January 23, 2013	16 Comments
July 4, 2012	14 Comments
September 16, 2012	13 Comments